Rose of Sharon: ၁၄နှစ်မင်္ဂလာ
မိဘရဲ့အေးမြငြိမ်းချမ်းတဲ့ရင်ခွင်ကိုစွန့်ခွာပြီး ချစ်သူ့ရင်ခွင်ခိုဝင်ခဲ့တာ ၁၄နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ…
၁၄နှစ်ဆိုတာ သက်တမ်းလဲမရင့်သေးသလို သိပ်လဲမနုတော့တဲ့သက်တမ်းမို့ ၁၄နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုတဲ့ အသိတစ်ခုနဲ့ ကြည်နူးမိရုံသာ…. ခလေးတွေကျောင်းတက်ရက်မို့ ဘာမှလဲမစီစဉ်ဖြစ်ပေမဲ့ နှစ်ဦးသားသီးသန့် နေ့လည်စာအတူစားဖြစ်ပါမည်….
နှစ်ဦးသဘောတူ ထူထောင်ခဲ့တဲ့ သည်အိမ်ထောင်လေးကို ၁၄နှစ်ကြာမြဲမြံစေခဲ့တာက အချစ်စစ်စစ်တစ်ခုတည်းနဲ့သာ…စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ကြတဲ့အခါ… ဗိုလ်လုကြတဲ့အခါ ထားပစ်လိုက်ခဲ့ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့ တကယ်တမ်းမထားပစ်ရက်ခဲ့တာဟာ အချစ်တစ်ခုတည်းကြောင့်… သူလည်း ကိုယ့်လိုဘဲတွေးမိမှာသေချာသည်…
ခလေးဘဝကစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တဲ့ နေ့နေ့ညည အချစ်တွေမွှန်းထုံနေတဲ့ အိမ်ထောင်မျိုး တကယ်မရှိဘူးလို့ လက်တွေ့သိလိုက်ရချိန်မှာသံယောဇဉ်နွယ်ကြိုးလေးနှစ်ချောင်းက ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ကို တင်းကြပ်စွာ ပတ်ရစ်ထားခဲ့ပြီ…. ချစ်နေရုံနဲ့မပြီးတဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘဝမှာ အချစ်သာမပါခဲ့ရင်တော့ ကွဲဖြစ်ခဲ့တာကြာပေါ့… ထပ်တူညီသောအချစ်ဖြစ်ဘို့တော့လိုအပ်မည်ထင်ရဲ့….ခုတော့ နှစ်ဦးသားငြင်းကြခုံကြပြီးရင် ကိုယ်ပြောတာလွန်သွားသလား အပြန်အလှန်တွေးရင်း စိတ်ကိုလျှော့ချ နှုတ်ဆိတ်နေလိုက်မိကြတာဟာ အချစ်တစ်ခုတည်းကြောင့်ပေါ့… ခလေးတွေစိတ်ဆင်းရဲရမှာစိုးလို့ ရန်မဖြစ်အောင် နေကြရင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပိုလို့နားလည်လာခဲ့တာ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်သိပ်ချစ်ခဲ့တဲ့ အချစ်တွေအပေါ်ထပ်တိုးလာတဲ့ အချစ်လေးနှစ်ယောက်ကြောင့်မို့ အိမ်ထောင်ပိုမိုသာယာလာခဲ့တာ…
မိဘတွေသဘောတူမတူထက် ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ချစ်ကြတဲ့ အချစ်တစ်ခုထဲနဲ့ ထူထောင်ခဲ့တဲ့ ဒီအိမ်ထောင်လေး ခိုင်မြဲဘို့ အချစ်ကိုအုတ်မြစ်ချပြီး နားလည်မှု၊စာနာမှု၊ခွင့်လွှတ်သည်းခံမှုတွေတထပ်ပြီးတထပ်ဆင့်လိုက်တဲ့အခါ သာယာပျော်ရွှင်စရာအိမ်ထောင်လေးတည်ဆောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီ…
တစ်ယောက်မကြိုက်တာတစ်ယောက်ကမလုပ်တော့ရင် ရန်ဖြစ်စရာအကြောင်းတွေတကယ်ကို မရှိတော့တာလက်တွေ့မို့ အိမ်ထောင်တစ်ခုခိုင်မြဲဘို့ တကယ်လိုအပ်တာ အချစ်စစ်စစ်တစ်ခုထဲသာ….
ခလေးတွေရဲ့နေ့တဓူဝကိစ္စတွေနဲ့ မအားလပ်နေကြတာမို့ အဖိုးကြီးအဖွားကြီးဖြစ်ချိန်မှ ချစ်သူတွေလိုပြန်နေကြရတော့မယ်လို့တွေးမိတိုင်း ကိုင်ဇာရဲ့ရွှေရတုသီချင်းကိုသတိရပြီးနှစ်သက်စွာရီမောမိသည်…
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ သီချင်းအဓိပ္ပါယ်ကိုသေချာနားလည်တာမဟုတ်ဘဲ ဆိုရလွယ်လို့ လိုက်ဆိုမိတဲ့သီချင်းလေးမှာ အဓိပ္ပါယ်တွေအများကြီးပါနေမှန်း သည်အရွယ်မှခံစားနားလည်မိသည်…
အဲဒီရွေရတုနှစ်ပတ်လည်အတူဆင်နွှဲဘို့၃၆နှစ်လိုပါသေးသည်… ထိုအချိန်ထိအိမ်ထောင်ခိုင်မြဲနေစေဘို့ ကျမရင်ထဲက အချစ်စစ်များကိုသာ ကျမအားကိုးပါမည်…. ကျမတို့တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်သိပ်ချစ်ကြကြောင်း ကျမတို့ယုံကြည်ကြသည်….
သိပ်ချစ်နေတဲ့အခါ ချစ်သူမကြိုက်တာဆို ဘာမှမလုပ်ဖြစ်တော့… အချစ်နဲ့အတူပါလာတဲ့ ကြင်နာခြင်း၊မြတ်နိုးခြင်း၊သစ္စာတရားနဲ့ နာလည်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတို့ဟာ အချစ်ကိုပိုပြီးလေးနက်စေတာမို့ သည်အိမ်ထောင်လေးခိုင်မြဲနေတော့မှာအသေအချာ….
ကိုယ်တို့အိမ်ထောင်လေးမှာလေးနက်တဲ့ချစ်ခြင်းတရားတွေဖုံးလွှမ်းလျှက် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာထိ အတူရှိနေကြဘို့တောင်းဆုချွေရင်း မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့ကို ချစ်သူနှင့်အတူ ဖြတ်သန်းလိုက်ပါဦးမည်...
Posted by rose of sharon at 10:23 AM
Anonymous March 4, 2013 at 10:40 AM
မမနော်ရေ ပျော်ရွှင်ဖွယ် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့ လေးဖြစ်ပါစေနော်
Ma Tint March 4, 2013 at 11:34 AM
၁၄မှတိုင် စိတ်မယိုင်ပဲ နှစ်ပေါင်းအသင်္ချေ
ဆုပန်ချွေသည် စိတ်တူ ကိုယ်တူ
ချစ်တဲ့သူမို့ တစ်ယောက်အကြိုက် တစ်ယောက်လိုက်လို့
ထာဝစဉ်ရွှင်ပြုံး ဘ၀ဆုံးတိုင် လက်တွဲညီညီ
ခိုင်မြဲတည်ကြောင်း ဆုတောင်းသွားပြီ နော်ဖောရေ....
ခိုင် March 4, 2013 at 11:59 AM
သေတပန်သက်တဆုံး အသက်နဲ့ ထပ်တူ ခိုင်မြဲ ကြပါစေ သူငယ်ချင်းတို့ရေ
" ခလေးဘဝကစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တဲ့ နေ့နေ့ညည အချစ်တွေမွှန်းထုံနေတဲ့ အိမ်ထောင်မျိုး တကယ်မရှိဘူးလို့ လက်တွေ့သိလိုက်ရချိန်မှာသံယောဇဉ်နွယ်ကြိုးလေးနှစ်ချောင်းက ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ကို တင်းကြပ်စွာ ပတ်ရစ်ထားခဲ့ပြီ…. ချစ်နေရုံနဲ့မပြီးတဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘဝမှာ အချစ်သာမပါခဲ့ရင်တော့ ကွဲဖြစ်ခဲ့တာကြာပေါ့… ထပ်တူညီသောအချစ်ဖြစ်ဘို့တော့လိုအပ်မည်ထင်ရဲ့….ခုတော့ နှစ်ဦးသားငြင်းကြခုံကြပြီးရင် ကိုယ်ပြောတာလွန်သွားသလား အပြန်အလှန်တွေးရင်း စိတ်ကိုလျှော့ချ နှုတ်ဆိတ်နေလိုက်မိကြတာဟာ အချစ်တစ်ခုတည်းကြောင့်ပေါ့… ခလေးတွေစိတ်ဆင်းရဲရမှာစိုးလို့ ရန်မဖြစ်အောင် နေကြရင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပိုလို့နားလည်လာခဲ့တာ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်သိပ်ချစ်ခဲ့တဲ့ အချစ်တွေအပေါ်ထပ်တိုးလာတဲ့ အချစ်လေးနှစ်ယောက်ကြောင့်မို့ အိမ်ထောင်ပိုမိုသာယာလာခဲ့တာ… "
ညီလင်းသစ် March 4, 2013 at 4:59 PM
A very happy anniversary... sis!
May you be able to walk on that path of love as long and far as forever!!!
စံပယ်ချို March 4, 2013 at 6:42 PM
၁၄ နှစ်မှ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်ပါစေ
ညိမ်းနိုင် March 4, 2013 at 7:06 PM
ရွေရတုနှစ်ပတ်လည်သာမက စိန်ရတုနှစ်ပတ်လည်နေ့များကိုပါ နှစ်ဦးပျော်ရွင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်
Nge Naing March 4, 2013 at 7:25 PM
ငွေရတု၊ ရွှေရတု၊ စိန်ရတုတိုင်အောင် ချစ်ခင်စွာ ပေါင်းသင်းနိုင်ပါစေ။
Aunty Oo March 4, 2013 at 8:19 PM
Shinlay March 4, 2013 at 8:30 PM
M Mimi Lei March 4, 2013 at 8:48 PM
ma naw & better half..
Happy Healthy Anniversary and Many Many more great returns..
ခင်မင်းဇော် March 4, 2013 at 10:11 PM
ရွှေရတုကျရင် ဖိတ်နော် ...:D
ယနေ့မှစ နှစ်တရာ တိုင်စေ..
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် March 5, 2013 at 5:11 PM
14နှစ်မှ နှစ်ပေါင်းရာချီ နားလည်မှု့ သံယောဇဉ်တွေနဲ့ သာယာတဲ့အိမ်ထောင်စုလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
ရွှေအိမ်စည် March 5, 2013 at 6:51 PM
အခုမှ လင့်ကို တွေ့လို့ မမရယ်..။
ညီမလေး ဆုတောင်းစကား နောက်ကျသွားပြီလား မသိဘူး။
ဒါပေမယ့် ဆုတောင်းချင်လို့ တောင်းခဲ့မယ်နော်...:) ။
ပျော်ရွှင်စရာ ၁၄နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် နားလည်ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းသော တွဲလက်များခိုင်မြဲသာယာပါစေ..။
San Htun March 6, 2013 at 8:17 AM
ပျော်ရွှင်သော ရတုများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ပါစေ အမ..း)
မြသွေးနီ March 6, 2013 at 5:18 PM
Happy Belated Anniversary ပါ မနော်ရေ...
ပျော်ရွှင်ဖွယ် မိသားစုနဲ့အတူ စိန်ရတု၊ ပတ္တမြားရတုတိုင်
မယ့်ကိုး March 6, 2013 at 8:26 PM
Ma Ma, Happy Belated Anniversary ...
Anonymous March 7, 2013 at 4:19 AM
It's not self-seeking
Love keeps no records of wrongs.
Love never fail.
Nyo Mya Swe
စန္ဒကူး March 7, 2013 at 8:22 AM
Happy Anniversary !! မမ... ပျော်ရွှင်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆီသို့ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ...
An Asian Tour Operator March 8, 2013 at 2:01 PM
Happy Anniversary Sis!!!
Models Wanted မော်ဒယ် အလိုရှိသည်